Ndiani angava muenzi mutende raJehovha?
Anotaura chokwadi mumwoyo make (2)
Haasvibisi zita remumwe (3)
Anochengeta zvaakavimbisa kunyange zvakamuomera (4)
Rwiyo rwaDhavhidhi. 15 Haiwa Jehovha, ndiani angava muenzi mutende renyu? Ndiani angagara mugomo renyu dzvene?+ 2 Uya ari kufamba asina mhosva,*+Achiita zvakarurama+Uye achitaura chokwadi mumwoyo make.+ 3 Haashandisi rurimi rwake kusvibisa zita remumwe,+Haaitire muvakidzani wake zvakaipa,+Uye haarevi* shamwari dzake.+ 4 Anoramba munhu wese anoshoreka,+Asi anokudza vaya vanotya Jehovha. Haadzokeri shure pane zvaanenge avimbisa,* kunyange kana zvisina kumunakira.+ 5 Haakweretesi mari yake achida kudzorerwa yabereka,+Uye haagamuchiri chiokomuhomwe kuti apomere munhu asina mhosva.+ Munhu wese anoita zvinhu izvi haazombozununguswi.*+
^ Kana kuti “akaperera kuna Mwari.”
^ Kana kuti “haanyadzisi.”
^ Kana kuti “apika.”
^ Kana kuti “haazombodzedzereki.”